I-Apple iqala ukubandakanya itshaja ye-20W kwi-IP Pro | IPhone iindaba
I-Apple iqala ukubandakanya itshaja ye-20W kwi-Pro Pro
Ingelosi Gonzalez | | iPad Pro, Izaziso
IPad Pro entsha ifike kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ukusukela ngoko baye baphumelela kwintengiso. Umdibaniso wesixhobo sonke kunye Keyboard Magic kwaye Ipensile ye-Apple yenza ukuba abasebenzisi bahendeke ukuba bazithenge. Olunye uvelwano oluziswe yile Pro entsha yePad kukufika kwefayile ye- I-USB-C. Intambo eyaziswa kwibhokisi yemveliso yayiyi-USB-C kunye neadaptha yayo yamandla ye-18W. Nangona kunjalo, iintshukumo zamva nje zika-Apple zisusa itshaja kwi-iPhone 12 iyenzile Qalisa ukufaka iadaptha ye-20W kwi-Pro Pro, ukuze iApple iqale ukwandiswa kwetshaja kwihlabathi liphela. Ewe kunjalo, nge-Pro Pro.
IPad Pro entsha iya kuthwala iadaptha yokutshaja engama-20W
UApple ususe itshaja kunye nentambo kwibhokisi ye-iPhone 12. Nangona kunjalo, iitshaja eziqhelekileyo ezithunyelwa nge-iPhones azixhasi ukutshaja okukhawulezileyo okwenziwe phantsi komgangatho weMagSafe kwizixhobo ezitsha. Ngale nto uyayidinga iadaptha yokutshaja eyi-20W Iyakwazi ukubonelela ngesixhobo nge-15W.
Iprosesa ye-A14X iya kufakwa kwi-Pro Pro entsha nakwi-Mac Apple Silicon yokuqala
Yiyo loo nto U-Apple uqalile kubandakanya i-20W yokutshaja iadaptha kwi-Pro Pro. Singayazi enkosi kwimisonto eliqela kwi Reddit aphume njengogwebu. Ngale adaptha, ukuba singafezekisa amandla aphezulu kwityala leMagSafe le-iPhone entsha. Ukudityaniswa kwale adaptha intsha kubini. Kwelinye icala, ukuphucula umthwalo kwi-Pro Pro kunye ne-iPhone 12. Kodwa ngenxa yokuba I-Apple ifuna ukwandisa i-20W yabo bonke abasebenzisi.
Kungenxa yokuba kucacile ukuba wonke umntu uneshaja 'endala', kodwa ukuba sifuna ukuthenga le 20W intsha kufuneka sihlawule i-euro ezingama-25 kunye nentambo ngokwahlukeneyo. Nangona kunjalo, imali yokutshintsha ukufumana itshaja entsha kukuthenga i-iPad Pro enexabiso elingabizi kwaye elinokungabuyisi ngaphandle kokuba sicinga ukuyifumana. Ukuba uthenga iwebhusayithi yeApple, yintoni ngaphakathi kwityala le-Pro Pro iphelelwe lixesha Ngesizathu esilula: kusekho i-iPad Pro ejikeleza ngetshaja ze-18W. Awunakho ukubhengeza into enokungafiki ukuba uyayithenga kwi-Intanethi. Kuze i-Apple iqinisekise ukuba yonke i-iPad Pro yayo ineshaja entsha, kunokwenzeka ukuba ayiyi kuhlaziya iwebhusayithi yayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPad » iPad Pro » I-Apple iqala ukubandakanya itshaja ye-20W kwi-Pro Pro
Yile nto izixhobo zokuqala zeApple yeAirTag ijongeka ngathi